unu Standard Classic – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ unu3အင်ဂျင်မျိုးကွဲများ (1 kW,2kW နှင့်3kW ပါဝါ) နဲ့ရရှိနိုင်ပါပြီ။ အဆိုပါ unu ပရီမီယံ3kW အင်ဂျင်ပေးစေလိုပါတယ် 25 km / h နဲ့ 45 km / h (moped) ဗားရှင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအသက် 25 km / h ဗားရှင်း 45 km / h ဗားရှင်း 50 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိပြီး 70 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိပါတယ်။
အဆိုပါ unu 140 ကီလိုမီတာဖို့အကွာအဝေးနှစ်ဆယ့်ဒုတိယဘက်ထရီချိတ်ဆက်ဖို့ Option တစ်ခုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ unu တစ်ဖြုတ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ9ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးအလွယ်တကူဖယ်ရှားပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြောင့်အတူ ပူးပေါင်း. ရန် LG က ဘက်ထရီများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်ရနိုင်နိုင်အောင် unu နောက်ဆုံးပေါ်ဘက်ထရီနည်းပညာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ accu တစ်ထောက်ပံ့ charger နဲ့ဆိုပုံမှန်ပါဝါထွက်ပေါက်မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတာဝန်ခံအချိန်ဘက်ထရီလုံးဝအချည်းနှီးသောအခါအကြောင်းကို5နာရီကြာသည်။
ဘက်ထရီအိုးအိမ် brushed လူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်ဘက်ထရီဘယ်လောက်အပြည့်အဝပြသတဲ့ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်ရစ်ဘက်ထရီဂျာမန်နှင့် တွဲဖက်. ပြန်လည်အသုံးပြုနေကြသည် GRS Batterien စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်။
အဆိုပါ unu တစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကိုစနစ် , ဒါမှမဟုတ် KERS ။ KERS ဖော်မြူလာ 1 မှလူသိများသည်: သင်ဘရိတ်တိုင်းအချိန်, စွမ်းအင်ကျောဘက်ထရီဖို့တိုက်ကျွေးနေသည် braking ။
ဒေတာများကိုအဖြစ်မှန်စာရွက် Download | Flyer Download